Home Isometric	Book of Demons MacOSX Free Download
Book of Demons MacOSX Free Download – GOG
Bhuku reMadhimoni ndeyeHack & Slash Deck-yekuvaka musanganiswa maunosarudza kureba kwemibvunzo. Wield mashiripiti makadhi pachinzvimbo chezvombo uye uuraye mauto erima mumakomba ari pasi peOld Cathedral. Sevha iyo inotyisa-yakarohwa Paperverse kubva kumabhande eArchdemon iye!
Bhuku reMadhimoni ndiyo yekutanga chikamu cheKudzoka 2 Mitambo – akateedzana epakutanga epakati-epakati mazita, akafuridzirwa nemazuva ekutanga egoridhe ePc mutambo.
Hausi mutambo wekadhi, asi zvinhu, zvitsinga, uye hunyanzvi zvese zvinoratidzwa semakadhi. Zano riripo mukugadzirisa ruoko rwako kune ese mamiriro Makadhi anogona kukwidziridzwa nemaroni uye iwe unogona kuwana akasiyana akawanda ane akasiyana mabhonasi. Ngano ndidzo dzinonyanya kutyisa asi dzakaoma kuwana.
Bhuku reMadhimoni rinoremekedza nguva yako. Iyo inoratidzira iyo Flexiscope injini iyo inobvumidza iwe kuganhura mutambo muzvikamu zvechero saizi. Iyo inotodzidza inhanho yako yekutamba uye inofanotaura nguva yekupedzisa chikamu chinotevera.
Kufambisa kwakareruka uye kurwisa makanika ndiko uko Bhuku reMadhimoni rinosiyana zvakanyanya kubva kune kumwe kubheja & mitambo yemitambo. Iko kazhinji kazhinji hakuna kukwana nguva yekubaya-kubvisa zvese zvipingaidzo zvakaita semonster nhoo, muroyi, huturu, kana kugogodza makadhi, saka nguva, kusarudzwa kwemakadhi uye kurongeka kwekuurayiwa kwakakosha.
Bhuku reMadhimoni rinoitika muPaperverse, nyika iripo zvachose mukati mebhuku rinobuda. Iyo ngano yezvakanaka nezvakaipa nezvekuchengetedza nyika kubva kune yekupedzisira dhiyabhorosi. Inonzwika kujairika? Rakafuridzirwa nerima uye rakasviba mamiriro emutambo wekutanga weDiablo, Bhuku reMadhimoni chikamu chemutero chikamu parody yehack & slash classics.
Mazhinji eBhuku reMadhimoni maficha akagadzirwa ne Gameplay nyaradzo mupfungwa. Pfungwa dzekufarira dzinoiswa kumusoro kwechidzitiro uye dzinozoratidzwa kana iwe uchinge waswedera padyo. Hunhu hwako hunosiya tsoka, idzo dzinogona kushandiswa kuteedzera nzira yako yekudzoka kana kuona nzira dzakatoshanyirwa usati wavhura mepu.
Paavhareji zvinotora maawa gumi kuti apedze mushandirapamwe nekirasi imwechete, asi kuwedzera hunhu uye kugona ese epamusoro Freeplay kuoma kwematanho uye maQuets anotora nguva yakareba. Iyo Roguelike modhi inopa imwe nhanho yedambudziko ne permadeath, inorambidzwa kuporesa uye kunyange zvimwe zvipingamupinyi zvekukunda.
Bhuku reMadhimoni MAC Mutambo idhisiki-yekuvaka musanganiswa uchitevera Hack & Slash maitiro emutambo. Nemutambo uyu ndiwe unosarudza kureba kwemibvunzo. Iko hakuna zvombo, pachinzvimbo vatambi vanoshandisa mashiripiti makadhi kuuraya mauto erima mumakomba ari pasi peOld Cathedral. Iwe, unoshandisa makadhi emashiripiti, ndiwe wega unogona kuponesa zvinonzwisa tsitsi Paperverse kubva pakutsamwa kweArchdemon!
Makadhi uye Deckbuilding
Uyu mutambo hausi wako wenguva dzose kadhi mutambo sezvo anokupa iwe nemhedzisiro mhedzisiro muchimiro chezvinhu, zvitsinga, uye hunyanzvi, iko kumonyanisa ndekwekuti izvo zvese zvinoratidzwa semakadhi. Izvo zvakare zvinokwanisika kukwidziridza makadhi ane runes uye kune zvakare akawanda misiyano ine akasiyana mabhonasi. Epic inonyanya pakati peavo ndeye maThe Legendaries asi iwo zvakare akatomoka kuwana.
Yakagadzirirwa zvikamu neFlexiscope
Bhuku reMadhimoni rinotarisa kukosha kwenguva yako. Inoita kushandisa iyo Flexiscope injini inobvumidza iwe kukamura mutambo muzvikamu zvinogona kuwedzera kune chero nguva yenguva. Uyezve, inoongorora kumhanya kwemitambo yako uye inofanotaura nguva ichatora kuti iwe upedze chimwe chikumbiro …
Kana icho chinangwa chemutambi chiri kuenda akananga kunopedzisa mushandirapamwe, iye anowana mutambo wemitambo unosvika kumaawa gumi, asi kana mumwe achishanda kuti aburitse hunhu uye agone ese akakwirisa eFreeplay nhanho nhanho uye maQuests, iyo nguva inotorwa yaizoita. kureba. Pane imwe nzira inonzi Roguelike uyo aripo mutambi ane imwezve nhanho yekunetseka nekurambidzwa kuporesa, permadeath uye mamwe matambudziko mazhinji parwendo.
Bhuku reMadhimoni rinoitika muPaperverse, nyika iripo zvachose mukati mebhuku rinobuda. Iyo ngano yekuponesa nyika kubva kune yekupedzisira dhiyabhorosi Inzwi rakajairika? Rakafuridzirwa nerima uye rakasviba mamiriro emutambo wekutanga weDiablo, Bhuku reMadhimoni chikamu chemutero uye chikamu chikamu chehack & slash classics.
Book of Demons MacOSX Free Download was last modified: July 30th, 2021 by Scarlet Blue